DigiTimes waxay ku adkeysaneysaa dhowr sii deyn oo Apple ah bisha Sebtember | Waxaan ka imid mac
Waxaa jira warar xan ah oo tilmaamaya suurtogalnimada soo bandhigida badeecooyin dhowr ah bisha soo socota, ma jiro hadal hal shey sidaa darteed waa in la sameeyaa dhowr jeer. IPhone-ka, jiilka cusub ee AirPods-ka cusub, iPad-ka iyo Mac-yada ... Waxaas oo dhan waxay soo jeedinayaan in shirkadda Cupertino ayaa fidin karta bandhigyada illaa bisha November leh Macs.
Waxaa jira dhowr falanqeeyayaal ah oo ku soo biiraya kooxdii saadaasha alaabada kala duwan oo waxaas oo dhami waxay si toos ah u horseedaan bandhigyo kala duwan ama halkii, ay ku qulqulayaan fiidiyowyo bandhigyo kasta oo alaab ah, laakiin DigiTimes waxay ku adkaysatay in Apple ay hal dhacdo u bilaabi karto dhammaan aaladaha.
Sidoo kale maahan wax la yaab leh in loo maleeyo in hal dhacdo la qaban karo inta lagu jiro bisha soo socota iyadoo la soo bandhigaayo, laakiin badiyaa dhacdooyinku waxay sii socdaan ilaa bisha Noofembar waana caadiyan Apple horeyba u sameysay nooca tempos -ka bilaabaya. Hadda ka Websaydhka MacRumors waxay ku celceliyaan warka si toos ah uga imanaya dhexdhexaad kale oo lagu yaqaan daadashadiisa, DigiTimes.
Waa inaad kala soocdaa sii -deynta Apple iyo cusboonaysiinta badeecadda ee lagu sii daayay shabakadda. Waana in mararka qaarkood Apple ay si toos ah u cusbooneysiiso koox iyada oo soo saarta sheyga shabakadda, sidaa darteed soo -jeedinta noocan ah looma yeeri karo sidaas. DigiTimes waxay horey u sheegtay maalmaheeda in Apple ay soo bandhigi doonto kan cusub 14-inch iyo 16-inch MacBook Pro bishii Sebtember sidaas darteedna waa inaad u fiirsataa dhaqdhaqaaqyada.
Dhanka kale, jiilka XNUMX -aad ee iPad ama AirPods ayaa lagu dari karaa dhacdada iPhone oo sidan ayaan u heli lahayn dhammaan badeecadaha la bilaabi doono bisha soo socota ... Ma u malaynaysaa inay macquul tahay?
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » DigiTimes waxay ku adkeysaneysaa sii -deynno badan oo Apple ah bisha Sebtember
Tim Robbins ayaa ku biiraya kabka la qabsiga taxanaha "dhogorta" ee Apple TV +